Gabar Dhallinyaro ah oo lagu dilay Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Gabar Dhallinyaro ah oo lagu dilay Muqdisho
Gabar Dhallinyaro ah oo lagu dilay Muqdisho
Marxuumad Hani Ismaaciil Yuubane ee xalay lagu dilay Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa fiidkii xalay waxaa uu Magaalada Muqdisho ku dilay gabar dhalinyaro ahayd, kaasoo dilka ka dib ka baxsaday gacanta sharciga.
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya qaabka uu u dhacay dilka gabadhaasi. Wararka qaar waxay sheegayan in ay u geeriyootay rasaas uu askarigaasi doonaayay in uu ku kala eryo laba qoys oo deris ahaa oo gacan ka hadal uu ku dhex maraayay agagaarka Xarunta Degmada Dayniile, halka warar kalena ay sheegayan in askariga iyo gabadhaasi uu murun soo kala dhexgalay, ka dibna uu madaxa xabad kaga dhuftay.
Askariga oo ka tirsan Ciidanka Ilaalada ee Xarunta Degmada Dayniile ayaa waxaa uu dilka ka dib ka baxsaday goobtaasi, inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayan in goor dambe oo xalay ahayd la soo qabtay.
Hani Ismaaciil Yuubane oo uur dhawr bilood ah laheyd ayaa waxaa meydkeeda loo qaaday Xarunta Hay’adda Dembi Baarista ee CID. Xaruntan ayaa baaritaan cadaymo reeb ah loogu sameeyaa dadka lagu dilo Magaalada Muqdisho.
Cabdiweli Ciise Maxamuud oo ka mid ah shacabka degan Degmada Dayniile ayaa sheegay in Ciidamada Booliska ay goobtaasi yimaadeen, mar uu baxsaday buu yiri askarigii wax dilay.
Hani Ismaaciil oo da’deeda lagu qiyaasay labaatan jir ayaa waxay ifka uga tagtey laba carruur ah iyo aabahood.
Qoyska iyo ehelada ee marxuumad Hani ayaa waxay Dowladda Federaalka ka doonayaan inay cadaalad hesho gabadhooda.
Hani Ismaaciil Yuubane